I-09 / 05 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Meyi 9, 2020
ICoronavirus itheleleke ngaphezu kwezigidi ezi-3 981 zabantu abayizinkulungwane emhlabeni
Kubikwa ukuthi uhlobo olusha lwe-coronavirus oluqhamuka eWuhan, esifundazweni saseHubey saseChina, selwedluliselwe kubantu abangaphezu kwezigidi ezi-3 981 3 emhlabeni jikelele. Ngokwesitatimende esenziwe yiHhovisi likaMongameli Wezokuxhumana, bangu-981 million XNUMX [Okuningi ...]
I-Doğupark 'Yehlula nge-Escalator'
ISamsun Metropolitan kuMasipala isebenzisa iphrojekthi ebalulekile eDoğupark. Isigaba sokuqala sokudlula ngokweqile nge-escalator, esizothuthukisa izimpilo zezakhamizi ezindala nezikhubazekile, sizophothulwa ngesikhathi esifushane bese sisebenza. USamsun Metropolitan [Okuningi ...]
Isikhathi Sokukhawulelwa Sikhawulelwe eKayseri
Umasipala waseKayseri Metropolitan uyaqhubeka nomsebenzi wawo wokuvuselela imigwaqo eshiywe ngenxa yokufika ekhaya. Ngenkathi eminye yemisebenzi yengqalasizinda yeKASKİ yenziwa kweminye imigwaqo enkabeni yedolobha, amaqembu weSayensi yeMisebenzi nawo enza imisebenzi yokwengeza. UMasipala Wamadolobha Amakhulu [Okuningi ...]
ISancaktepe City Hospital Metro izokhula ibe ngu-2022
IMeya kaMasipala wase-Istanbul Metropolitan, u-Ekrem İmamoğlu, yenza izivivinyo ezindaweni ezimbili zokwakha ohlangothini lwase-Anatolian naseYurophu, eziqhubeka nokusebenza ngesikhathi sokufika ekhaya. Ukumiswa kokuqala kuka-Imamoğlu kwakuwukuqala ukuphathwa kwangaphambilini ngo-2017 futhi kumiswe ngonyaka ofanayo. [Okuningi ...]
Isibalo sabashokobezi abangathathi hlangothi kusukela ngoJanuwari 1 bangu-1359
Ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe Wezokuvikela Kuzwelonke uHulusi Akar, Induna Yabasebenzi Jikelele u-Gen. Yaşar Güler, u-Commander of the Land Forces u-Gen. Ümit Dündar, u-Commander of the Naval Forces Admiral Adnan Özbal, u-Commander of the Force Forces uHasan Küçükakyüz kanye nozwelonke [Okuningi ...]
Umdlavuza Ngi-7 Okuningi neminye Imithi emi-4 esetshenziselwe ukwelashwa kwe-MS
UNgqongqoshe Wezemindeni, Wezabasebenzi kanye Nezenhlalo u-Zehra Zümrüt Selçuk umemezele ukuthi eminye imishanguzo eyi-7 ifakiwe ohlwini lokubuyiselwa kwemali, engu-4 yomdlavuza kanye ne-11 yokwelashwa kwe-MS. “Iphindwe nge-SUT entsha [Okuningi ...]
Mayelana neBursa Bilecik Isitimela Esiphezulu
Ujantshi weBursa-Bilecik umgwaqo wesitimela osezingeni eliphakeme ozohlanganiswa nomgwaqo wesitimela ohamba ngesivinini esiphezulu i-Ankara-Istanbul lapho usuqediwe. Kwakhiwa ujantshi osezingeni eliphakeme phakathi kweBandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ngaphakathi komngcele wolayini. IBursa-Yenişehir yephrojekthi eyi-105 km ezoxhunywa kumugqa we-Ankara-Istanbul ovela eBilecik [Okuningi ...]
Isinqumo se-Flash Channel Istanbul Isinqumo Esivela ENkantolo!
Ngesicelo sokukhanselwa kwesinqumo esithi "Environmental Impact Assessment (EIA)" sangoJanuwari 17 seKanal Istanbul Project esiphikisanayo noMnyango Wezemvelo kanye Nokufakwa Kwamadolobha kaMasipala Wase-Istanbul Metropolitan. [Okuningi ...]
Ukukhanselwa kwendiza ngenxa yomqedazwe we-Covid-19 sekuphendulile izindawo zezindiza zaba ngamadolobha amakhulu. Ngo-Ephreli, ukuhamba kwabagibeli kwehle ngamaphesenti angama-99 uma kuqhathaniswa nenyanga edlule, kuyilapho abantu abayizinkulungwane ezingama-84 kuphela abakwazi ukundiza. Izinkulungwane ezingama-65 zazo [Okuningi ...]
UNgqongqoshe uKaraismailoğlu u-Iftar ne-Workers at T26 Tunnel Site
UNgqongqoshe Wezokuxhumana kanye Nezingqalasizinda u-Adil Karaismailoğlu wenza ithertar nabasebenzi abasebenza e-Ankara-Istanbul High Speed ​​Sitima iT26 Tunnel Site. UKaraismailoğlu, ohlanganyele nabasebenzi endaweni yokwakha esifundeni saseBozüyük eBilecik, kulo nyaka uluhlobo olusha [Okuningi ...]
I-Ankara isiqede umhubhe we-Istanbul T14 ozofushanisa imizuzu eyi-26
UKaraismailoğlu, obephenya ngesiza sokwakhiwa kwe-T26 Tunnel esifundeni saseDemirköy, esakhiwa ngaphakathi kwe-Ankara-Istanbul High Speed ​​Sitimela Project, esifundeni saseBozüyük, uthatha zonke izinyathelo ngokuhambisana nezincomo zoMnyango Wezempilo mayelana nohlobo olusha lwe-coronavirus (Kovid-19). [Okuningi ...]
Ngemuva kokusebenza iminyaka engama-83, imisebenzi ejikeleza ujantshi weSamsun-Sivas, obevaliwe ukuthuthwa ukuze ithuthukiswe ngoSepthemba 29, 2015, isiphelile. Ingqalasizinda yonke kanye nokuhlelwa kabusha komugqa wamakhilomitha angama-431 kwavuselelwa kanye neYurophu [Okuningi ...]
Isitimela sezimpahla ezithwele izinto zokusetshenziswa kwepulasitiki sisuka eGaziantep saya e-luorlu siqede ukudlula kwabo eMarmaray ngokubamba kukaNgqongqoshe uKaraismailoğlu. Ungqongqoshe Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda u-Adil Karaismailoğlu, umthwalo wokuqala wasekhaya odlula eMarmaray ngomhlaka 08.05.2020 [Okuningi ...]
Ukuze kwenziwe izinto zokuhamba zikhululeke futhi zingaphazamiseki, uMasipala waseKocaeli Metropolitan, oqhubeka nomsebenzi wawo kulesi sehlakalo se-coronavirus, uthango lwamatshe amatshe ahlanganisiwe ngaphambi kwe-Orduevi e-Izmit Büyük Seka Tunnel ngesonto eledlule. [Okuningi ...]
Isicelo se-Invoice Esimisiwe Siza Ukuphila e-İzmir
Umasipala we-Izmir Metropolitan uqalisa ukusebenzisa uhlelo "lokumiswa kwamarisidi" oluqale e-Istanbul, e-,zmir ngokufunwa ngumphakathi. Izikweletu zamanzi zemindeni enobunzima bezomnotho kulolu bhubhane lomhlaba jikelele zizokhokhwa ngokuqina kwe-İzmir. Izmir Metropolitan Municipality, [Okuningi ...]
I-TCG TRAKYA Yesibili Yezindiza Izothuthukiswa Ngokwesibalo
UMongameli Wemboni Yezokuvikela Yomongameli waseTurkey. Dr. İsmail Demir, SSB isikhulu WenaTube Uphendule imibuzo ngesiteshi sakhe. Enkulumweni yakhe, lapho u-İsmail Demir ehlola isimo esijwayelekile kulo mkhakha, i-LHD yesibili yayihlobene ne-TCG TRAKYA. [Okuningi ...]
Ezolimo kanye amaHlathi kanye Ministry of Nature Ukuvikeleka bese National Parks (DCM) Directorate Jikelele lenkaba Turkey yifusi inyamazane (Dama dama) sokuvikelwa, uyaqhubeka ukukhiqizwa futhi ukukhululwa izifundo. Kulomongo, imvelo e-Antalya Manavgat [Okuningi ...]
Ngokwesibalo sephrojekthi entsha yeMishini Nemikhicimbi Yezimboni Yezokwelapha (i-MKEK), umugqa omusha wokukhiqiza owakhiwe ngemishini yasekhaya nowezwe lonke ungene e-Gazi Fişek Factory. Kuqeda ngokuphelele ukuncika phesheya, ngokuphelele [Okuningi ...]
Umqondisi Jikelele Wezinsizakusebenza Zokulawula Izikhungo Zezindiza - Abaqeqeshi bezokuhlola abahlola isitimela mayelana nesikhungo kanye nesikhundla esizothathwa Isikhungo Sokuhlolwa: I-General Directorate Yezindawo Yezindiza Yezokuphatha. [Okuningi ...]
Ukuthi impesheni izokhokhelwa ngaphambi kweholide ngaphambi nje kokuba iholidi libe se-ajenda yezigidi zabantu asebethathe umhlalaphansi. UZehra Zümrüt Selçuk, Ungqongqoshe Wezemindeni, Yezabasebenzi Nezenhlalo, ngezinkokhelo zempesheni [Okuningi ...]
Isingeniso kuLimi Lwezandla lwaseTurkey sabafundi ngeViki Elikhubazekile
Ungqongqoshe Wezemindeni, Wezabasebenzi Nezenhlalo, uZehra Zümrüt Selçuk, umemezele ukuthi bazokwenza imisebenzi yokuqwashisa ngaphakathi kwenhlelo zohlelo lwe-EBA ngoMeyi 10-16 Meyi. UNgqongqoshe uSelçuk; “Umenyezelwe nguMongameli wethu uMnu Recep Tayyip Erdoğan [Okuningi ...]
Imali Ye-Cash Ngeke Idlule Amatekisi Ohwebo! Awekho amatekisi angathathwa ngaphandle kwemaski!
UMnyango Wezindaba Zangaphakathi uthumele isiyingi sezindlela zokuhlanzeka kwamatekisi kwezohwebo nabangu-81. Ngokusho kombuthano, amatekisi azohlaselwa magciwane masonto onke, amakhasimende angeke akwazi ukuthola itekisi ngaphandle komaskandi. Abashayeli bamatekisi bezentengiso benza ngokwemithetho yokuhlanzeka yomuntu siqu [Okuningi ...]
Qeqesha Abantu Bokuphamba Kwamazinga Eziphambano eFrankfurt 1 Ufile, 2 Abalimele
Kwenzeke ingozi embi esifundeni saseNied eFrankfurt, eGermany, ngabo-20.00 kusihlwa izolo kusihlwa. Ngokwesitatimende sofakazi bokuzibonela, isitimela esifika masisha sichoboza abantu ngenkathi izithiyo zivulekile. Incazelo ngemuva kwengozi [Okuningi ...]